ဝီကီပီးဒီးယား:သင်ခန်းစာများ/တည်းဖြတ်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ Edit tab
၁.၁ ပြင်ဆင်ခြင်း အနှစ်ချုပ်
၁.၃ စာမျက်နှာ သိမ်းဆည်းခြင်း
၃ ဆောင်းပါးများကို အမည်ပြောင်းလဲခြင်း
၄ ဆောင်းပါးများ ဖန်တီးခြင်း
၅ ကာကွယ်ထားသော စာမျက်နှာများ
ဝီကီပီးဒီးယား စာမျက်နှာအများစုကို တည်းဖြတ်ခြင်းက လွယ်ကူပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယား အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးကို အသုံးပြုပြီး တည်းဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းတဲ့ wiki markup (wikitext) ကို အသုံးပြုပြီး တည်းဖြတ်ခြင်းနဲ့ နည်းလမ်းသစ် VisualEditor (VE) ကို သုံးပြီး တည်းဖြတ်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ . ဒီစာမျက်နှာက ရှင်းပြချက်တွေနဲ့ ဗီဒီယိုလမ်းညွှန်တွေက အများဆုံးအသုံးပြုနေကြတဲ့ wikitext တည်းဖြတ်ခြင်းအတွက် ပိုပြီး ပြောပြထားပါတယ်။ VisualEditor အသုံးပြုခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ စာမျက်နှာရဲ့ အောက်ဆုံးအပိုင်းမှာ ဆက်ကြည့်ပေးပါ။
တည်းဖြတ်မှုကို လေ့ကျင့်ဖို့အတွက် sandbox ကိုသွားပြီး "ပြင်ဆင်ရန်" ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ စာမျက်နှာပေါ်ရှိ စာသားတွေ ပါဝင်တဲ့ တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် အကွက်လေးကို ပြသပေးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုခုကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီမှာ မြင်ရတဲ့ စာသားကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဤစာမျက်နှာကို သိမ်းရန် ကိုနှိပ်ပြီး ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါ။
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောစာမျက်နှာ - Wikipedia:ဆောင်းပါးများကို တည်းဖြတ်ခြင်း
ပုံမှန်အားဖြင့် ဝီကီပီးဒီးယား စာမျက်နှာထိပ်နားမှာရှိတဲ့ ပြင်ဆင်ရန် ကို နှိပ်ပြီး ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် သင်ကြည့်နေတဲ့ စာမျက်နှာက စာသားတွေကို ပြင်ဆင်လို့ရတဲ့ အနေအထားနဲ့ ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကွက်ထဲမှာ သင်ပေါင်းထည့်လိုတဲ့ စာသားကို ရိုက်ထည့်ပြီးသော်လည်းကောင်း၊ စာသားတွေ ပုံစံချဖို့ wiki markup သုံးပြီးသော်လည်းကောင်း၊ ပုံတွေ ဇယားတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ သင်စာမျက်နှာတစ်ခုကို တည်းဖြတ်တိုင်း ကောင်းမွန်တဲ့ ကျင့်ဝတ်ကို ပြသတဲ့အနေနဲ့ တည်းဖြတ်အကွက်ရဲ့ အောက်က အ​ကျဉ်း​ချုပ်​ ဆိုတဲ့ အကွက်မှာ သင်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလိုက်တာအတွက် ရှင်းလင်းချက်ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရှင်းပြချက်ကို တိုတိုတုတ်တုတ်ရေးတာ ကောင်းပါတယ်။ နမူနာအနေနဲ့ စာလုံးပေါင်းပြင်ဆင်တာအတွက်"typo" လို့ပဲ ရိုက်ထည့်ရုံနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ အလားတူ သင့်ပြင်ဆင်မှုက အရေးမကြီးတဲ့ ပြင်ဆင်မှုလောက်ပဲဆိုရင် "အရေးမကြီးသော ​ပြင်​ဆင်​မှု ​ဖြစ်​သည်" ဆိုတဲ့ အကွက်လေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ထပ်မံသိရှိလိုပါက Help:Edit summary ကို ဖတ်ပါ
ဒုတိယအနေနဲ့ ပြောရရင် သင်ဟာ နမူနာပြသရန် ခလုတ်ကို အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်တဲ့ အကွက်ထဲမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ပြီးသွားရင် ဤစာမျက်နှာကို သိမ်းရန် အစား န​မူ​နာ​ပြ​ရန် ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အဲဒါဟာ သင်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးရင် ဘယ်လိုမြင်တွေ့ရမလဲဆိုတာ သင်အမှန်တကယ် မသိမ်းရသေးမီ ပြသပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အမှားတွေ လုပ်မိတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အခြားသူတွေ မမြင်မီ အမှားတွေကို ရှာတွေ့နိုင်အောင် ဒီခလုတ်လေးက ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ န​မူ​နာ​ပြ​ရန် ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပြင်ဆင်မှုကို နမူနာကြည့်နိုင်သလို စာမျက်နှာ ရာဇဝင် ကိုလည်း မရှုပ်ပွစေတော့ပါဘူး။
"နမူနာပြရန်" ခလုတ်ဟာ "ဤစာမျက်နှာကို သိမ်းရန်" ခလုတ်နားမှာ ရှိပြီး အကျဉ်းချုပ် အကွက်ရဲ့ အောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်မံသိရှိလိုပါက Help:Show preview ကို ဖတ်ပါ
အကျဉ်းချုပ်မှာ ဖြည့်ပြီးပြီလား? နမူနာ ကြည့်ပြီးပြီလား? ဒါဆိုရင် နောက်ဆုံးအဆင့်အတွက် သင်အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဤစာမျက်နှာကို သိမ်းရန် ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Wikimedia Commons သို့ ဖိုင်များတင်ခြင်းနှင့် ဝီကီပီးဒီးယား ဆောင်းပါးများအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းခြင်းကို ပြသပေးမည့် ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာ
ရုပ်ပုံများ၊ အသံများနှင့် ဗီဒီယိုများ ပါဝင်သည့် ဆောင်းပါးတွေက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဝီကီပီးဒီးယား ဒါမှမဟုတ် Wikimedia Commons ပေါ်မှာ ရှိနှင့်နေတဲ့ ဖိုင်ကို "[[File:FILENAME|thumb|ဖော်ပြချက်]]" ဆိုတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ ကုဒ်နဲ့ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ "thumb" ကို အသုံးပြုခြင်းက မူလပုံရဲ့ နမူနာပုံသေးကို ပြသပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နမူနာပုံသေးရဲ့ အရွယ်အစား၊ ထားမယ့်နေရာ စတဲ့ ရွေးချယ်စရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။
လော့ဂ်အင်ဝင်ထားတဲ့ အသုံးပြုသူတွေကပဲ သင့်တော်တဲ့ ဖိုင်အမည်နဲ့ ပုံများကို တင်နိုင်ပါတယ်။ ပုံမတင်မီ ပထမဆုံး ဆုံးဖြတ်ရမှာကတော့ ပုံရဲ့မူပိုင်ခွင့် အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။Wikimedia Commons ရဲ့ ဖိုင်တင်ပေးတဲ့ ဝိဇတ် နဲ့ ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ ဖိုင်တင်ပေးတဲ့ ဝိဇတ် တို့က မီဒီယာဖိုင် တင်ဖို့အဆင့်ဆင့်ကို လမ်းညွှန်သွားပါလိမ့်မယ်။ တင်လိုက်သမျှဖိုင်တွေ အားလုံးကို ဝီကီပီးဒီးယားနဲ့ Wikimedia Commons နှစ်ခုအကြား အပြန်အလှန်ပုံပွားပေးမှာ ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ရှာဖွေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုမိုပြီး အသေးစိတ်ကျတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုတော့ Help:ပုံတင်နည်းလမ်းညွှန် မှာ ဖတ်ပါ
ပုံတင်နည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကို Help:Wiki Markup နှင့် ပုံတင်ခြင်း မိတ်ဆက်/၁ မှာ ဖတ်ပါ
ဝှက်ထားတဲ့ ရွှေ့ရန် ခလုတ်ကို ဒီမှာ ပြသထားပါတယ်။
အကယ်၍ ဆောင်းပါးတစ်ခုဟာ အမည်မှားပေးထားတယ်လို့ သင်ယုံကြည်ခဲ့ပါက ကျေးဇူးပြုပြီး ဆောင်းပါးဟောင်းက စာသားတွေ အကုန်ကူးပြီး ဆောင်းပါးအသစ်တစ်ခု မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ — အဲဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် ယခင်တည်းဖြတ်မှတ်တမ်းတွေ ကွဲထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တမ်း ပြီးပြည့်စုံစေမယ့် နည်းလမ်းကတော့ စာမျက်နှာ ထိပ်က ရွှေ့ရန် ခလုတ်နဲ့ အမည်သစ်ကို ရွေ့ပြောင်းနိုင်ပါတယ် (အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ မှတ်ပုံတင်ထားဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်)။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်တာဆိုရင်တော့ ကျေးဇူးပြုပြီး ရွေ့ပြောင်းစာမျက်နှာက သတိပေးချက်တွေကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပေးပါ။ စာမျက်နှာ အမည်ရွေးချယ်တာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေကို Wikipedia:ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်များ မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အကယ်၍ "သံတူကြောင်းကွဲ" စာမျက်နှာ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ Wikipedia:သံတူကြောင်းကွဲ ကို ဖတ်ရှုခြင်းက အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပါ။
ထပ်မံသိရှိလိုပါက Wikipedia:စာမျက်နှာ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း ကို ဖတ်ပါ
ဆောင်းပါးဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတာ ပြောပြထားတဲ့ ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ
ဆောင်းပါးသစ် တစ်ခု ကို မစတင်မီ ဝီကီပီးဒီးယားရဲ့ ထင်ရှားအရေးပါမှု လိုအပ်ချက်များ ကို နားလည်ထားဖို့ လိုပါမယ်။ တိုတိုပြောရမယ်ဆိုရင် ဆောင်းပါးတစ်ခုအတွက် စာပေတိုက်ကြီးတွေ၊ သတင်းစာတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေ၊ စကောလားဂျာနယ်တွေ နဲ့ ယုံကြည်ရတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေ အစရှိတဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ရင်းမြစ်တွေ စုဆောင်းထားဖို့ လိုပါမယ်။ ဝီကီပီးဒီးယားပေါ်က သတင်းအချက်အလက်တွေဟာ အတည်ပြုနိုင်ခြင်း ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်မံသိရှိလိုပါက Wikipedia:သင်၏ ပထမဆုံးဆောင်းပါး ကို ဖတ်ပါ
အချို့စာမျက်နှာတွေကို တည်းဖြတ်ပြင်ဆင်လို့မရအောင် ကာကွယ်ထားပါတယ်။ အဲဒီစာမျက်နှာတွေမှာ ပြင်ဆင်ရန် အစား ရင်းမြစ်ကို ကြည့်ရန် ဆိုတာပဲ ရှိပါတယ်။
ထပ်မံသိရှိလိုပါက Help:ကာကွယ်ခြင်း ကို ဖတ်ပါ
သင့်ရဲ့ တည်းဖြတ်ပြောင်းလဲမှုကို အခြားသော တည်းဖြတ်သူက နောက်ပြန်ပြင်သွားခဲ့ရင် ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာမှာ ဆွေးနွေးပေးပါ! ဆွေးနွေးခြင်း မပြုလုပ်ဘဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောင်းလဲမှုတွေကို ပြုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ်တည်းဖြတ်လို့ မရအောင် ပိတ်ပင်ခံရနိုင်ပါတယ်။
ထပ်မံသိရှိလိုပါက Wikipedia:Reverting ကို ဖတ်ပါ
VisualEditor ဆိုတာက wikitext markup တွေ သိထားစရာမလိုဘဲ တည်းဖြတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ထပ်မံသိရှိလိုပါက အကူအညီ:မျက်မြင်တည်းဖြတ်ဖြင့် ပုံထည့်ခြင်း မိတ်ဆက်/၁ ကို ဖတ်ပါ
ပုံစံချခြင်း သင်ခန်းစာကို ဆက်သွားမယ် →
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝီကီပီးဒီးယား:သင်ခန်းစာများ/တည်းဖြတ်ခြင်း&oldid=667565" မှ ရယူရန်
၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၇:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၇:၀၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။